Mpanamboatra sy mpamatsy tady fibre optika | Fitaovana tokana | China Single Mode Fiber Optic Patch Cord Factory
Ity ST Single Mode Patch Cord ity dia iray amin'ireo mpampifandray andiany MT. Ny ferrules an'ny andiany dia mampiasa lavaka mpitari-dalana roa misy savaivony eo amin'ny tarehy faran'ny ferrule sy ny tsimok'aretina ho an'ny fifandraisana marina. Ho fanampin'izay, azo zahana mba hamokarana karazana jumpers isan-karazany. Ny famolavolana matevina an'ny mpampitohy dia mamela ny jumper hanana cores marobe sy habe kely. Etsy ankilany, ity ST Single Mode Patch Cord ity dia azo ampiasaina betsaka amin'ny tontolon'ny tsipika fibre optika avo lenta ...
Fomba tokana hanamafisana kofehy patch fibre
Ity fomba tokana ahafahana manisy tariby fibre multimode ity dia natao manokana hanamboarana tadim-pohy avy amin'ilay fitaovana mankany amin'ilay rohy fibre optic cabling. Ity sosona fiarovana matevina ity dia matetika ampiasaina amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny transceiver optika sy ny boaty terminal. Raha ampitahaina amin'ny tadin'ny mahazatra eny an-tsena, ny fomba tokana ataontsika amin'ny tadin'ny patch multimode dia manana tombony amin'ny famerimberenana tsara, fahombiazan'ny inter-plug tsara ary fitoniana ny hafanana tsara. Etsy ankilany, reali koa ...
SC mankany SC Single Mode Patch Cord
Ity tadin'ny patch SC to SC tokana ity dia misy lavaka mpitari-dàlana roa misy savaivony eo amin'ny tarehy faran'ny ferrule sy ny tsipika fitarihana ho an'ny fifandraisana marina. Mora tokoa amin'ny fametrahana azy ary tsy mila fikojakojana manokana. Ho fanampin'izay, azo zahana mba hamokarana karazana jumpers MPO isan-karazany. Ampiasaina miaraka amin'ny dingana mandroso, ny tadin'ny patch SC to SC antsika dia azo ampiasaina betsaka amin'ny tontolo filasiana optika mitambatra avo lenta amin'ny fizotran'ny tariby, hiantohana ny fiasa haingam-pandeha. O ...
SC mankany amin'ny LC Single Mode Patch Cord
Ity kofehy patch SC na LC tokana ity dia mifandray amin'ny rafitry ny fifindran'ny optika, izay mahatsapa ny fiasan'ny fifandraisana amin'ny alàlan'ny fametahana optique, ary tsy misy na inona na inona amin'ny endrika fikajiana famantarana. Raha ampitahaina amin'ny tadiny mahazatra eny an-tsena, ny tadin'ny SC amin'ny LC tokana fantsom-panafody dia manana tombony amin'ny fanomezana fampitana angon-drakitra avo lenta ary fanohanana herinaratra famatsiana herinaratra mahery vaika. Fitaovana fiarovana hery tsara sy fanovana mandeha ho azy, manohana ult ...
MTRJ mankany MTRJ Fiber Optic Patch Cord
Ity MTRJ mankany MTRJ Patch Cord ity dia miaraka amina rafitra miaro, izay mahatsapa ny fiasa hisorohana ny fahasimban'ny tontolo manodidina ny fibre optique, toy ny rano, afo, fikororohana herinaratra, sns. Ao amin'ny fibre multimode dia manana savaivony ny fotony, izay mitovy amin'ny hatevin'ny volon'olombelona. Ny vodin'ny fibre tokana dia misy savaivony. Ny ivelan'ny fotony dia voahodidina valopy fitaratra manana index ambany ny ...
LC mankany LC Single Mode Fibre Patch Cord
Ity LC to LC tokana modely fibre patch patch ity dia mety ho toerana mety amin'ny fampifandraisana ny zoro fizarana fibre optika sy ny socket information optique amin'ny switch, ny fifandraisana misy eo amin'ny switch, ny fifandraisana misy eo amin'ny switch sy ny solosaina ary ny fifandraisana misy eo anelanelan'ny ny socket information optique sy ny solosaina. Ampiasaina amin'ny haavo avo lenta, ny LC mankany LC tokana fonosana fibre patch dia azo ampiharina amin'ny subsystem fitantanana. Noho ny habeny sy ny lanjany maivana, ...
LC Single Mode Fibre Optical Patch Cord
Ity LC Single Mode Patch Cord ity dia mety indrindra amin'ny tontolo iainana matevina. Raha ampitahaina amin'ny tadin'ny mahazatra eny an-tsena, ity kofehy ity dia misy mpampitohy somary kely, izay mamonjy habaka bebe kokoa raha oharina amin'ny jumper tariby mahazatra nefa tsy misy fiatraikany amin'ny fisarihana. Ary ny kalitaon'ny rambony mpampitohy dia fohy kokoa noho ny fonenan'ny rambony mpampitohy LC, izay mamonjy toerana bebe kokoa amin'ny fitantanana kabinetra. Noho ny fahombiazana avo lenta, ny LC Single Mode Patch Cord anay dia manana fohy kokoa ...
· Mihaona amin'ny EIA / TIA 604-2 miaraka amina ferrule ho an'ny tambajotra cabling haingam-pandeha. · Ny tariby vita pirinty dia manampy amin'ny fanazavana sy ny fahafantarana ireo tariby samihafa. · Zirconia Ceramic Ferrule Optimum IL sy RL. · Ny tariby fibre tsy misy dikany dia mampiseho fahombiazana lehibe amin'ny faharetana. · K = fonosana boaty K dia miaro ny entanao. Famaritana Connector FC mankany FC Jacket OD 1.6 / 1.8 / 2.0 / 3.0mm Fiber Mode 9 / 125μm Jacket Color Yellow Polishing APC ka APC Jacket Material PVC (OFNR), OFN ...